I-Compostela House Room 5 (Villa de Leyva, Boy) - I-Airbnb
I-Compostela House Room 5 (Villa de Leyva, Boy)
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Esperanza
I-Casa Compostela iyindawo efudumele nenokuthula. Itholakala kahle eduze kwetheminali kanye namabhulokhi ambalwa ukusuka ePlaza, uzojabulela izindawo ezinkulu eziluhlaza lapho uzoba nomuzwa wokuba sendaweni enhle yezwe, kuphela enhliziyweni kamasipala.
Imibhede ikhululekile, umkhathi usondelene futhi unothando. Ukwengeza bazoba nezindawo zokupaka ezizimele, ikhishi, igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela kanye nezindawo ezikhuthazayo. Siyakwamukela, woza uzovakashela i-Villa de Leyva.
Amandla angaqondakali eCompostela alungele:
- Yazi ibhikawozi edumile yaseFrance njengohlelo lwasekuseni lothando
- Vuselela amandla, susa ingcindezi, nqamula
- Ukubona indawo ngemva kokuphumula kahle.
- Pheka ngendlela othanda ngayo noma wabelane nge-BBQ
- Tour Villa de Leyva futhi ube nokuvikeleka kokuba imoto ipakwe
4.72 · 32 okushiwo abanye
Sitholakala ngokulingana kusuka e-French Bakery edumile lapho bathengisa khona ama-dessert amnandi, udinga nje ukwelulekwa. Umgwaqo uthulile kodwa ngaphakathi kwebanga lokuhamba kukhona izindawo zokudlela, amabhikawozi, izitolo nezindawo zokudlela zawo wonke amabhajethi. Amabhulokhi ambalwa kude yiPlaza de Villa de Leyva.
Sizotholakala zikhathi zonke. Inhloso yethu ukuthi sikwazi ukwabelana ngezinzuzo ze-Villa de Leyva nezivakashi eziningi ngangokunokwenzeka, ukuze zijabulele ukuguquguquka kokuba sedolobheni.
Izinga lokuphendula: 68%